Apple ayaa soo rogtay sharciyo cusub oo lagu xakameynayo barnaamijyada carruurta | Wararka IPhone
Toni Cortés | | Apple Store, Ciyaaraha IPhone, dhowr
Apple waxay siineysaa ilaa 3-da Maarso, 2020 barnaamijyada carruurta inay u hoggaansamaan xeerarka cusub. Waxaa jira si cadaalad ah oo dalbanaya sharci cusub oo loogu talagalay codsiyada iyo ciyaaraha loogu talagalay carruurta. Shirkaddu waxay waqti u qabatay soosaarayaasha barnaamijyadan inay wax ka beddelaan oo ay la jaanqaadaan tilmaamaha cusub.
Markii waalidku booqdo qaybta Carruurta ee Dukaanka Apple, waxay filayaan barnaamijyada ay helaan ilaali xogta carruurtaada. Waa inay bixiyaan oo keliya waxyaabaha ku habboon da'dooda, u baahan albaab waalid si ay uga baxaan arjiga. Iyo sida iska cad, inay had iyo jeer codsadaan rukhsadaha markay fulinayaan iibsiga isku dhafan ee ku jira arjiga la sheegay.
Waa muhiim in macluumaad shakhsiyan lagu aqoonsan karo ama macluumaadka ku jira aaladda aan loo gudbin karin dhinacyada saddexaad, iyo in xayaysiisyada ay dib u eegaan shaqaalaha Apple si loo ogaado in la soo bandhigi karo iyo in kale.
Tilmaamaha 1.3 iyo 5.1.4 waxay si faahfaahsan u tilmaamayaan tiro xeerar aad muhiim u ah oo la xiriira barnaamijyada ku jira qeybta loo yaqaan Carruurta. Shirkaddu waxay durba la shaqeysaa qaar ka mid ah kuwa hadda jira ee barnaamijyada soo saara si ay uga caawiyaan inay la kulmaan labadan nooc ee heerarka cusub.
Sida iska cad, dhammaan codsiyada cusub ee lagu soo daray qeybtaan carruurtu waa inay raacaan tilmaamahan, waxayna kugula talinayaan in horumariyayaashu ay kuwa hadda jira ku cusbooneysiiyaan xeerarka cusub. Apple waxay siinaysaa xoogaa xoriyad ah kuwa horey loo sii daayay, waxayna siinaysaa horumariyeyaasha lix bilood oo dheeri ah si ay wax uga beddelaan codsiyada jira.
Muddo lix bilood ah oo loogu talagalay barnaamijyada jira
Waqtiga kama dambaysta ah wuxuu ku egyahay 3-da Maarso, 2020. Haddii taariikhdan, Apple ay ogaato codsi ka mid ah buugga carruurta ee aan u hoggaansamin tilmaamaha cusub ee lagu soo rogay, waa laga saari doonaa Bakhaarka illaa ay ka beddelaan oo ay caddeeyaan shaqaalaha Cupertino.
Waxay u egtahay war caadi ah aniga. Waa lagama maarmaan in si adag loo xakameeyo waxyaabaha ku jira adduunka carruurta. Waa mid ka mid ah xaqiiqda dhabta ah ee Apple ee ku saabsan xorriyadda waxyaabaha aan la xakamayn karin iyo shakiga aan ka heli karno barnaamijyada Android ee Google Play.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay siineysaa ilaa 3-da Maarso, 2020 barnaamijyada carruurta inay u hoggaansamaan xeerarka cusub
Spotify waxay bilaabi doontaa inay isticmaasho goobta aaladaha si loo xakameeyo xubnaha qorshooyinka qoyska